Ireo nosy lehibe indrindra hitsidika an'i Portiogaly
Na dia manintona betsaka amin'ireo mpitsidika any Portiogaly aza ny tontolon'ny oniversite, ny ampahany betsaka amin'ny nosy tsy hita maso dia ny fanangonana ny nosy any amin'ny firenena. Eo anelanelan'ireo archipelagosan'i Madeira (300 kilaometatra eo akaikin'ny morontsirak'i Afrika) sy ny Azores (850 kilaometatra any andrefan'i Portegaly any Portiogaly), dia misy nosy maromaro mipetraka enina no manome traikefa miavaka sy mahafa-po ho an'ny mpitsidika.
Ny fanontaniana lehibe àry dia hoe iza no tsara indrindra? Ireto misy dimy amin'ireo nosy portogey vitsivitsy hitsidika.
Katharina Jaeger / Getty Images
Ny nosy lehibe indrindra ao Azores, São Miguel dia trano fonenan'ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra sy ny seranam-piaramanidin'ny seranam-piaramanidina. Izy roa dia miorina ao Ponta Delgada, renivohitra sy lehibe indrindra, ka saiky ny mpizaha tany rehetra no hanomboka ny fitsidihany any.
Trano fivarotana maro, trano fisakafoanana, zaridaina ary toeran-kafa hafa any Ponta Delgada tsara tarehy mba hizaha ireo mpitsidika mandritra ny iray na roa andro, fa ny tsara indrindra amin'ny nosy 40- amin'ny 10 kilaometatra dia any an-kafa.
Efa misy ny fiara fitateram-bozaka, saingy raha tsy ampy ny fotoana, manofa fiara na môtô amin'ny môtô ianao dia mahafa-po kokoa. Tahaka ny any Eoropa afovoan-tany, ny fiara mitondra fiara eo amin'ny ankavanana, ary saika ny lalana rehetra dia efa voavaha sy tsara. Aoka ho fantatrao fa ny ankabeazan'ny olona dia tery sy mahatsiravina, ary maro ny fiara mividy dia hanana fifandraisana manual / stick.
São Miguel dia fantatra amin'ny toerana toy ny "nosy maitso", ary mora ny mahita ny antony. Ny tany volkano sy ny toetr'andro dia mahatonga ny ala sy havoana matevina, ary rehefa miaraka amin'ny tendrombohitra ao amin'ny afovoan-nosy, dia misy toerana mahatalanjona avokoa ny toerana rehetra.
Ny iray amin'ny tsara indrindra dia eo amin'ny Vista do Rei, miaraka amin'ny sahona maitso sy manga ao Sete Cidades. Ho fanampin'ny bonus fanampiny, ny Hotel Monte Palace, kintana five-ketra, dia miara-mipetraka, afaka mijery akaiky amin'ny olona rehetra miaraka amin'ny kiraro mafy sy ny fahatsapana ny zava-niainana.
Be dia be ny safidy azo antoka sy tsy misy vidiny, na any Ponta Delgada sy tanàna sy tanàna maro hafa ao amin'ilay nosy. Tsara sy tsy misy fialantsasatra sy divay mendrika, na aiza na aiza, fa ny sakafo faran'izay tsy hay hadinoina tamin'ilay dia mankany São Miguel dia angamba ny "Cozida das Furnas".
Ity dikan-teny malaza avy amin'ny portogey malaza ity dia voatsabo, tena ara-bakiteny, avy amin'ny volkano! Isan'andro, miboraka ny vilany any amin'ny tany mafana ny vilany, manosika azy hivoaka indray, feno sakafo, amin'ny mitataovovonana. Loha mankany Restaurante Tony ao Furnas hanandrana azy.
Raha miresaka momba ny asa momba ny ety ivelany, ny fandroana amin'ny loharano mafana dia pastime malaza hafa ao São Miguel. Betsaka sy toeram-pisakafoana maromaro no hita eny amin'ny nosy, anisan'izany ny iray eo ambanin'ny riandrano iray. Asa tsy maintsy atao izany raha mbola eo ianao.
Thomas Stankiewicz / LOOK-foto / Getty Images
Na ny nosy Azorean rehetra dia manana ny anjarany eny amoron-dranomasina, ny ankamaroan'izy ireo dia mainty sy vatolampy iray-raha tsy misy an'i Santa Maria. Ny nosy atsimo indrindra any Azores no misy ny fasika, rano mafana ary faran'izay maina ao amin'ny vondronosy, ka mahatonga azy ho toerana fialan-tsasatry ny fialan-tsasatra mahafinaritra.
Ny ankamaroan'ny mpitsidika dia misafidy ny hijanona ao Almagreira, miaraka amin'ireo malaza Praia Formosa (Formosa Beach). Tendrombohitra maitso matevina mamakivaky an'io loko fotsy lava io, izay manome ny toerana misy azy, dia manana hetsika maromaro hanamafisana ireo mpandidy.
Miaraka amin'ny fanatanjahan-tena hafa toy ny jet-skiing sy kayak, dia misy hetsika mahasarika toy ny fanaraha-maso ireo dobo manakaiky ny vatolampy, ary na dia ny fandrobana tamin'ny taonjato faha-16 teo afovoan'ny moron-dranomasina aza mba hanomezam-boninahitra ny tantara mba hijerena ny asa eo amin'ny seza fiandrianana.
Noho ny habeny kely (37 kilaometatra kilaometatra), mora mora ny mijery raha te hiala amin'ny torapasika ianao. Ankoatra ny valan-javaboary maro sy ny làlam-pivoarana, dia mendrika ny manamarina ny mahita ny sasany amin'ireo karazana simenitra ao amin'ny trano eo an-toerana, satria samy hafa amin'ny fanorenana trano izy ireo, ary maro no voatsangana sy voaravaka.
Ny fitsidihana an'i Santa Maria dia tsotra, miaraka amin'ny sidina avy any amin'ny tanibe Portugal, ary ny seranam-piaramanidin'i Azores ao São Miguel. Afaka miala sambo eo anelanelan'i São Miguel sy Santa Maria mandritra ny fahavaratra (volana Mey ka hatramin'ny tapatapaky ny volana septambra). Ny dingana dia maka adiny telo isaky ny mandeha, fa tsy mihazakazaka isan'andro.
Tsy azo atao ny manonona an'i Pico tsy miresaka momba ny volkano izay manome ny anarany amin'ny anarany. Ponta do Pico no tendrombohitra avo indrindra ao Portiogaly, avo 7.700 metatra eo ho eo amin'ny Atlantiana akaiky, ary manjaka ny fomba fijery any amin'ny toerana hafa ao amin'ilay nosy.
Ireo mpitsangatsanganana Keen dia afaka mandingana ny tampony mandritra ny adiny efatra, ary miverina amin'ny telo, manao ho andro fitsanganana mahery vaika saingy azo fehezina. Na dia mihoatra noho ny any an-toeran-kafa ao Azores aza, ny toetr'andro dia tena azo havaozina manodidina ny tendrombohitra-ka aza manantena fa ny toe-javatra any ambany dia ho toy izany koa any an-tampony, ary manantena ireo planina tsy maintsy miova amin'ny fotoana fohy!
Efa taonjato telo hatramin'ny nipoahan'ny Pico, ary nanjary lasa volkano volkano mahavokatra izay mahatonga ny nosy ho tsara indrindra ho an'ny fambolena. Ny divay Verdelho avy any Pico dia nentina nanerana an'i Eoropa an'i Eoropa ka hatramin'ny taonjato faha- 19, ary nanao fiverenana nandritra ny taona faramparany. Ny Museu do Vinho dia toerana tsara hianarana bebe kokoa momba ny tantaran'ny divay Pico, ary afaka mandamina fitsangatsanganana ihany koa. Misy fanazavana bebe kokoa momba ny tranom-bakoka, anisan'izany ny ora fisokafan-tsofina, eto (amin'ny teny portogey).
Ankoatra ny fanimbana volkano, betsaka ny zavatra hafa azo atao any amin'ny nosy faharoa lehibe indrindra any Azores. Avy amin'ny fandalinana ny lavaka lava lava lava Gruta das Torres ny fandehanana mandehandeha miantsena (Avrily ka hatramin'ny oktobra no fotoana tsara indrindra hijerena azy ireo), mihoatra ny amina toerana maromaro hivoahana sy hilomano, mora ny mameno andro vitsivitsy Pico.
Azonao atao ny manidina any São Miguel, na maka sambo avy any amin'ireo nosy manodidina. Ny trano fonenana dia lafo kokoa ary mameno haingana any amin'ny fahavaratra volana, toy izany koa ny boky mialoha na manomana ny dia ho an'ny fotoam-bavaka.
Flores dia midika hoe "voninkazo" amin'ny teny portiogey, ary mahalana dia toerana iray izay noraisina araka ny tokony ho izy. Na ireo jadona Azoreana avy any amin'ny nosy hafa aza dia naneho hevitra momba ny tontolo voajanahary tsy voavaha, izay natao tamin'ny 2009 ho an'ny biosphere UNESCO.
Any amin'ny ilany andrefan'ny vondronosy Azores, ny nosy 55 kilaometatra toradroa dia rakotra volkano volkano, fito amin'ireo dia lasa farihy mahafinaritra nandritry ny arivo taona. Ireo dia tsy maintsy mahita toetrandro raha ao Flores, ny manga amin'ny rano naparitaky ny tendrombohitra avo sy ny loko marevaka avy amin'ireo voninkazo be dia be izay manome ny nosy ny anarany.
Ny lohahevitra ara-jeografika hafa dia an'i Rocha dos Bordões, ampolota-bolongana an-jatony maro izay mitovy amin'ny fàkana sodina, ary ny Monchique Islet, vato mainty miavaka izay manamarika ny faritra andrefana indrindra any Portogaly (sy ny hevitra sasantsasany, Eoropa).
Ny ankamaroan'ny hetsika fanatanjahan-tena manodidina ny fanaovana ny ankamaroan'ny hatsaran-tarehy natolon'i Flores, miaraka amin'ny fitsangantsanganana, ny fiantson-java-manidina, ny sambo ary ny canyoning dia tena malaza indrindra. Tahaka ny amin'ireo nosy hafa ao Azores, ny fijerena trozona dia azo jerena ihany koa amin'ny vanim-potoana.
Ny ranomandry sy ny renirano dia fialamboly malaza ho an'ny mponina eo an-toerana sy ny mpitsidika, ary miaraka amin'ny vorona mpijery miaraka amin'ny karazana avy any an-toerana, karazana vorona migratory maromaro miala ao Flores, amin'ny diany avy any Amerika.
Toerana iray milamina sy tranainy antonontonony izao tontolo izao, izay mihetsiketsika kokoa ny fiainana. Raha mitady fialan-tsasatra fialan-tsasatra ianao, dia mety ho ratsy lavitra noho ny fandaniana andro vitsivitsy ao Flores.
SATA / Air Azores mandehandeha tsy tapaka eo anelanelan'i Flores sy São Miguel, na dia midika aza ny toetr'andro Atlantic tsy hay lazaina manodidina ny ampahatelon'ny sidina dia tapitra ny fongana. Izany no mahatonga an'i Flores tsaratsara kokoa amin'ny fanombohan'ny fitsangatsanganana, fa tsy amin'ny farany.
Ny fiarandalamby dia mihazakazaka mankany Corvo eo akaiky, saingy ela loatra ka tsy mahazatra ny nosy hafa mba hahasoa ny ankamaroan'ny mpizaha tany.
Nitsidika olona iray tapitrisa eo ho eo isan-taona i Madeira, mahita mponina avo roa heny noho ny Azores, ary iray amin'ireo faritra manan-tantara any Eoropa . Ny ankamaroan'io asa io dia mifantoka amin'ny 268 kilaometatra kilaometatra Madeira, izay mitazona ny ankamaroan'ny mponina maharitra ny vondronosy.
Sambatra amin'ny fahamendrehan'ny taona miadivana (ny hafanana isan'andro eo anelanelan'ny 68 sy 80F), Madeira dia fahafinaretana amin'ny natiora. Ny rafitra marefo amin'ny vato sy ny lakolosy fiara dia manome rano ho an'ny voninkazo sy ny vokatra manerana ny nosy, ary ny lalan'ny fikojakojana an'ireny ranomandry ireny dia manamboatra lalan-tsisika tonga lafatra ho an'ireo faritra hafa tsy azo idirana. Ny ala goavam-be any amin'ny lohasaha avaratra dia trano fonenan'ny hazo teratany maro, izay manome fialofana ho an'ny vorona maro sy mpifindra monina maro.
Madeira koa dia toerana tsara ho an'ny dia an-dalamby, miaraka amin'ny làlana amoron-dranomasina marevaka, mihetsiketsika izay maneho fomba fijery manerana ny nosy. Ireo lalana ireo kosa dia mitombo, noho izany, aoka ho azo antoka ny manofa fiara miaraka amina hery ampy hiatrehana ny havoana! Ny tobim-pitrandrahana dia tsy toy ny mahazatra toy izay azonao atao, ka mameno izany rehefa mahazo vintana ianao.
Miaraka amin'ny soavaly mitaingina, paragliding sy golf maro, Madeira dia manolotra hetsika maro momba ny rano. Ny sambo, ny lalao lalao sy ny kayak dia mora mora foana, ary ny fisidinana snorkeling sy scuba dia tsara indrindra noho ny rano madio sy ny fiainana an-dranomasina.
Ho an'ireo izay aorian'ny fialantsasatra tsy dia maika, misy tora-pasika marobe sy toerana fialan-tsasatra manerana ny nosy. Aza manantena ny fasika fotsy na maitso volamena, na izany aza - ny tantaran'ny volkano any Madeira dia midika fa ny fasika dia mena na mainty. Misy tora-pasika maranitra vitsivitsy namboarina maimaim-poana, raha toa ka izany no safidinao.
Raha azonao atao ny manamarina ny fotoana, alaivo ny asan'ny fandroana vaovao amin'ny taombaovao ao amin'ny seranana Funchal. Nametraka seho iray manerantany ho an'ny fetibe lehibe indrindra manerana izao tontolo izao izy tamin'ny taona 2007, ary tena nahavariana tokoa ny taona lasa.
Ny sakafo sy ny zava-pisotro any Madeira dia malaza, miaraka amin'ny vokatra marobe izay am-pilaminana - saingy mazava ho azy, manandrana tsara hatrany hatrany raha tsy voatery mivezivezy any an-dranomasina ianao! Ataovy azo antoka ny hanandrana divay manana ranon-tsavony, mofomamy misy ranom-boankazo, ary ranom-boankazo farafahakeliny, alohan'ny hanombohana ireo safidy an-jatony maro hafa fantatra. Ny trondro mainty hoditra dia sakafo malaza ao an-toerana, raha ny tononkalo, ny orita, ary ny hazondamosina toy ny hoditra, dia tsara indrindra any.
Vondron'antsy Eoropeana marobe no mandeha any Madeira, anisan'izany ireo mpilatsaka an-tsitrapo maro. Ny boatin-tsambo dia mijanona tsy tapaka any amin'ny seranan-tsambo ao Funchal, ary mandritra ny ankamaroan'ny taona dia misy fiara sy sambo mpitondra entana mandritra ny adiny roa mankany amin'ny nosy iray any Porto Santo ao Madeira.
5 antony hitsidihana an'i Portugal tamin'ny ririnina
November Weather in Portugal
Ahoana no ahazoan-dalana avy any an-tanàn-dehibe any Portiogaly
Ireo atleta 5 tsara indrindra any Aviero, Portugal
Torolàlana momba ny sakafo ho an'ny faritra Alentejo ao Portiogaly
Rhodes - Nosy Grika Tranon'ny kandidan'i Md John
10 Best Hotels in Mathura & Vrindavan ho an'ny trano rehetra
Andriamatoa Torolalana an'ny Prince Edward County
South Cruise Maps South East Asia
Raha misy ankizy misakafo malalaka any Charlotte amin'ny Talata
Mandeha eny amin'ny alpika Swiss avy any amin'ny toeram-pisakafoana mankany Jungfrau
Albuquerque Uptown Neighborhood Guide
Mivezivezy eran'izao tontolo izao ao New York City
Aiza no hitondrana ny ankizy hahita fialan-tsasatra
Ity ny fomba ahafahanao mitsidika ny kianjan'i Jurassic
Tari-dalana ho an'ny sakafo an-tsakany sy an-tsakany ao Però
Gold Panning ao Dahlonega, Zeorzia
Inona no tanàna tsara indrindra any Irlandy mba hitsidihana tsy misy fiara?